Momba anay | Ruian Honetop Machinery Co., Ltd.
Milina HONETOP manana traikefa 14 taona hatramin'ny 2002 tao amin'ny tsipika fonosana. Manome vahaolana famonosana mahomby amin'ny karazana vokatra rehetra ao anaty boaty baoritra sy fonosana harona isika. Toy ny milina fanaovana carton automatique, milina famonosana boaty boaty sakafo, masinina fonosana baoritra vita amin'ny taratasy, milina fantsom-bokotra, masinina cartoner bulb, famenoana ary fametahana masinina carton, cartoner ho an'ny tavoahangy, sachet, tavoahangy, fantsona, stick ... Izahay koa manana milina fonosana kitapo, milina fanaovana mololo taratasy sns.
Rafitra famonosana endrika manokana. Tongasoa eto amintsika ny fifandraisana amin'ny antsipirian'ny masinina. Ny orinasa dia nandalo ISO900 fanamarinana rafitra kalitao manara-penitra iraisam-pirenena, fanamarinana CE, fanamarinana UL. Masinina 95% no naondrana tany amin'ny firenena 50, ao anatin'izany ny USA, Canada, Chile, Mexico, Spain, Dominica, Venezoela, Russia, Turkey, Morocco, Jamaica, Nicaragua, Colombia, Middle East ...
Satria misy hevitra mandroso famolavolana, kalitaon'ny vokatra tsara ary serivisy aorian'ny fivarotana mahomby, amidy any amin'ny faritra dia misy fiantraikany tsara, nahazo ny fiderana an'ny mpanjifa ihany koa.
Tonga tany amin'ny "antoka ara-kalitao, serivisy matihanina, fahafaham-po ny mpanjifa"
ho an'ny tanjona kendrena, ny "hatsaram-panahy sy ny fahamarinana aloha, tombony faharoa, fototr'asa" ho an'ny filozofia. Mitazona ny fanahin'ny mpisava lalana, ny fanavaozana ny pragmatika ary ny famokarana avo lenta, mba hahafahan'ny mpanjifanay mandray soa amin'ny serivisinay.
Ny ekipa, ny fanavaozana, ny fanoloran-tena ary ny tsy fivadihana 'no fepetra takiana amin'ny orinasa ary koa ho an'ny mpiasa rehetra. Ekipa sy fikambanana manana tanjona izahay. Ny firaisankina sy ny pragmatisme no tena takiana amin'ity fikambanana ity, raha ny fanavaozana kosa no tanjona ezahan'ny ekipa atao. Noho izany, amin'ny asa ifotony dia tokony hieritreritra toerana iray isika, hiasa mafy amin'ny toerana iray, hivadika ho tady, hikatsaka ny marina amin'ny zava-misy ary hanatanteraka ny asa etỳ an-tany. Amin'ny alàlan'ny fianarana sy amin'ny fahatsiarovan-tena, "dia hanao izay rehetra mahomby amin'ny fampandrosoana ny orinasa izahay, izay rehetra mahasoa ny firaisan-kinan'ny orinasa, ary izay rehetra mitombo amin'ny fidiram-bola sy hampihena ny fandaniana" hahatratrarana ny orinasa maharitra fampandrosoana.